China Automotive Division emepụta na suppliers | KAIHUA
● Usoro ime
System Sistemụ Nzuzo
Ngwọta na ebu na-eme maka mputa mputa akpaaka dịka bumpers, grille, mud muddle wdg; usoro dị n'ime dị ka ogwe aka, ogwe ụzọ, ogidi wdg; Jụrụ usoro dị ka shround, ofufe, mmiri tank wdg
Companylọ ọrụ ahụ na-akwado ụgbọ ala a ma ama n'ụwa OEM dịka McLaren na ụgbọ ala egwuregwu ndị ọzọ na Tesla, yana German, French, Japanese, na American. Ọ na-esitekwa na China maka SAIC, Geely, Great Wall, Guangzhou Automobile, BYD, wdg. Chinesedị ụgbọ ala ndị China zuru ụwa ọnụ bụ ụdị ọrụ njikọta dịka FAW-Volkswagen, Beijing Benz, Shanghai GM, Dongfeng Nissan, Dongfeng Renault na Shenlong Automobile, ma bụrụ ndị na-eweta ọkwa izizi dịka Faurecia, Pio, Yanfeng, Echi, Magna na na. Abia.
Estic Ime ụlọ:
Onye ọkwa ọkwa nke mbụ:
Advantage: belata ebu na-eri na mmepụta na-eri.
Ndị ọrụ Kaihua na-agbaso "ndị mmadụ na-adabere, na-emeri site na mma, na-aga n'ihu ọhụrụ, na-adigide management" azụmahịa nkà ihe ọmụma, nditịm akara "àgwà, oge na-eri", niile na-ahịa dị ka etiti. Kaihua kpebisiri ike ịghọ ezigbo onye na-ebu ngwaahịa na ụwa.
Huangyan base ekpuchi ebe nke 40,000 square mita, na n'elu 500 ọrụ na n'ichepụta gburugburu 1,500 Ebu kwa afọ. Ọ nwere lọjistik ngalaba, Automotive nkewa, Ezinaụlọ nkewa, Ngwa oru na Medical nkewa, pụrụ iche na imewe nke ájá bins, pallets, n'èzí tebụl na oche, crates, nchekwa igbe, ntụ oyi, refrjiraeto na ndị ọzọ na ebu. A na-ere 80% nke ebu a na mba ofesi, ọkachasị GARDENLIFE, GRACIOUSLIVING, RIMAX, SMARTFLOW, MAOROPLASTICS, STARPLAST, wdg. ụdị ndị nwere onwe ha. A na-ebupụ 60% nke ebu ahụ karịa mba 60 ma ọ bụ mpaghara dịka Europe, North America, South America, Asia, wdg.
Sanmen base na-ekpuchi mpaghara nke mita 36,000 na ndị ọrụ karịrị 350, ma na -emepụta ihe karịrị 600 nke ebu na kwa afọ. Ọ bụ ọkachamara na ihe eji akpụ akpụ plastik maka akụkụ ụgbọ ala dịka bumpers ụgbọala, ngere, oriọna na akụkụ ndị ọzọ dị na mpụga; ụgbọala dashboard, ụzọ panel na ndị ọzọ n'ime ime mma usoro akụkụ; ikuku ikuku, agụba ikuku, ọfụfụ na akụkụ ndị ọzọ dị jụụ. Ọ kachasị na-enye ịkpụzi na ọrụ maka ụdị ụgbọ ala amaara nke ọma dịka GM, FORD, VW, BMW, BENZ, Peugeot, RENAULT, Magna, FIAT, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, na ụlọ ọrụ ndị ama ama ama dịka IAC, PO, Faurecia, Viston, BOSCH, BEHR, Valeo na Denso. A na-ebupụ 70% nke ebu ahụ karịa mba 30 ma ọ bụ mpaghara dịka Europe, North America, South America, Asia na wdg.
Nke gara aga: Ezinaụlọ
Osote: Ngalaba Lọjistik
Car bompa ebu
Car ụzọ ebu
Akpanaka ngwa ogwe ebu
Car azụ wheel ebu